Dugsiyada Nuuradiin Waa Shamac Ka Dhex Ifaya Waxbarashadda Somalililand
Sunday May 02, 2021 - 09:34:07 in Articles by Hadhwanaag News
Qalinkii: Tukaale Nuur
Dugsiga Nuuradiin waxa la aasaasay sanadkii dabayaaqadii sanadka 1995 wuxuuna ka kooban yahay sadex qaybood oo waa wayn Qaybta Barbaarinta Ubadka, Dugsiga Hoose Dhexe iyo Dugsiyada Sare oo (qayb hablaha ah iyo qayb inamada ah). Dugsigan waxa Aasaasay muwaadin reer Somaliland Mahad Ibraahin Maxamed oo 30 kii sano ee danbeeyay kusoo dhex jiray bahda waxbarashada kana soo bilaabay Machad luuqdaha kala duwan lagu barto, maantana ka mid ah dugsiga ugu badan ee ay dhigato ardayd reer Somaliland.
Dugsiyada sare ee nuuradiin-schools wuxuu ka mid yahay dugsiyada ugu waxbarashada tayada fiican dalka ayaa waxay ka soo bilaabeen heerar kala duwan ka dib markii ay kor u qaadeen heerka aqooneed ee macalimiinta duruusta siiya ardayda wax kabarta dugisyada nuuradiin.
Waxa marag ma doona, Sanad kasta Dugsiyada Sare ee Nuuradiin waxay kaalmaha koowaad ka galaan Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada dalka waana talaabo muujinaysa heerka tayada tacliinta iyo tarbiyada ardayda wax ka barata dugsiyadda Nuuradiin. Dugsiga Nuuradiin waxa uu diyaariyay deegaan ku haboon waxbarashada iyo Aqoon u saamaxda arday wal oo Nuuradiin ka baxay Dugsiyadiisa sare inuu qaadan karo Takhasus wal oo ay Jaamacadaha Maxaliga ah iyo kuwa Dibaduba ay bixiyaan – ardayda dibadda u waxbarasho doonata
Sidaas darteed hadafka waxbarasho ee Dugsiyada Nuuradiin iyo Halgankooda naf-huridda ah waa mid hanaqaaday oo hirgashay si ay bulshada ugu soo kordhiyaan arday ka dhisan aqoon maadi ah, mid diini ah iyo dhaqanka suuban ee aynu ka rabno ardaydeenu in ay yeeshaan.
Hadaba dhacdadii ka dhacday qaybta dugsiga Nuuradiin Boys waxay ahayd kicin bulsho oo dabada ku haysa dano gaara iyo dagaal siyaasadeed oo cid gaar ah ka danabyso oo la rabo in lagu dumiyo mustaqbal ardayda wax ka barata. Xikmad soomaaliyeed ayaa tidhaa Geedku intuu yaryahay ayaa la toosiyaa, waxa taas ka dhigan Dugsigu waa goob tarbiyada ardayga lagu dhiso dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa lagu wanaajiyo; arday kasta oo ku kaca fal lidi ku ah iskuulka ama ka baxsan anshaxa waxbarashada waa qasab in talaabo laga qaado, iyadoo loo marayo hay,addaha sharciga ee dalka iyo wasaaradda waxbarashada Somaliland. Ma qumana in arday iyo macalinkiisa, ama arday iyo dugsigii uu wax ka baranayay laga dhex shaqeeyo iyadoo dano gaara la wato.